अपरिचित गर्न एक ठूलो ठाउँ छ नयाँ मित्र पूरा गर्न । प्रयोग गर्दा तपाईं च्याट अपरिचित, हामी तपाईं जडान गर्न अर्को अनियमित च्याट प्रयोगकर्ता गरौं र तपाईं मा पाठ च्याट, प्रत्येक अन्य संग. च्याट सेवा पूर्ण अज्ञात, आफ्नो च्याट साथी देख्न सक्दैन, जो तपाईं छन्, र तपाईं रोक्न सक्नुहुन्छ, एक च्याट मा कुनै पनि समय — यो तपाईं मदत गर्छ सुरक्षित रहन. च्याट गर्न छ बस एक क्लिक टाढा छ । कुनै दर्ता आवश्यक छ क्रम मा प्रयोग गर्न हाम्रो च्याट सेवा. पनि, यो निःशुल्क प्रयोग गर्न छ — यति, अपरिचित कुरा अब । क्रम मा राख्न रूपमा टाढा सकेसम्म, मानव. माफ गर्नुहोस् असुविधाको लागि. म कुरा थियो यो साँच्चै राम्रो केटी देखि बेल्जियम तर मिल्यो काटिएको छ । बस तपाईं बताउन चाहनुहुन्छ म साँच्चै तपाईं जस्तै र हामी भने हुन सक्छ । नमस्ते, तपाईं कसरी हो । मलाई थाहा छ यो कुरा छैन कि तपाईं को लागि कसरी म छु, तर यो साँच्चै मामला लागि मलाई तपाईं कसरी हो । हामी यहाँ थिए । अरे क्यानाडा बालिका, यो मलाई इन्डोनेशिया देखि म दु: खी छु मेरो जडान धेरै खराब थियो, म सुने आफ्नो कथा र लागि प्रतीक्षा युवा सुझाव, त्यसैले दलील छ ।, खगरिया, अन्तिम रात म संग कुरा थियो, एक जर्मन नाउँ मान्छे स्टिभ. यदि यो पुग्छ स्टीव ड्रप, मलाई एक सन्देश मा र टकसाल. कहिलेकाहीं तपाईं महसुस आफ्नो हृदय बाहिर आफ्नो छाती कसैले लागि छ, तर व्यक्ति कहिल्यै ख्याल राख्नुहुन्छ वा तपाईं माया गर्नुहुन्छ तपाईं । म खोज । म हुँ एक छली मानिस र म हालै कुरा संग एक केटी छ, तर म हराएको जडान छैन म लेखन छु यो एक अनियमित व्यक्ति मा अंतर. अरे हामी बस थिए कुरा मिनेट पहिले । तपाईं मलाई भन्नुभयो. र म मा बाँच्न चाड हो । पनि । हामी हराएको जडान तरिका । म. म हुँ बस भएको कुराकानी संग एक केटी देखि दिल्ली. तर यो मिल्यो काटिएको छ । अरे, म हुँ मान्छे देखि मुम्बई भएको संयुक्त गृहनगर अरे अन्तिम रात म संग चैट, एक महिला देखि मुम्बई उमेर म प्रेम कुराहरु उनको र आनन्द को धेरै, तर कुनै तरिका काट्नु. के तपाईं कहिल्यै सुन्न त्रासदी को डार्थ विपत्ति को बुद्धिमानी? म लाग्यो । यो एक कहानी को हुनेछ, तपाईं बताउन । यो एक सेत खुट्टा । म छु देवी पुरानो युरोप देखि पोल्याण्ड. जवान दास हो कि रुचि छ गरिरहेका चित्र जिम्मेवारी र पो. म भेट यो साँच्चै सुन्दर, वर्णन रूपमा आफु एक हिप्पी बस जान्न चाहन्थे भने तपाईं चाहन्थे सम्पर्क राख्न किनभने वाई. नमस्ते अमृता, हामी यस्तो थियो एक राम्रो कुराकानी अन्तिम रात मेरो बारेमा भइरहेको चान्डलर । तपाईं देख्न भने यो सन्देश के जवाफ र तपाईं गर्न सक्छन् मेल आई. र तपाईं आफ्नो अनुसन्धान र देख को लागि एक जीवन साथी । म पनि हुँ देख एक जीवन साथी को लागि, तर. नमस्ते, म भेट एक केटी जसलाई म थियो एक राम्रो कुरा, तर जडान मिल्यो काटे । त । भने तपाईं कहिल्यै अनुहार समस्या मा ली. म कुरा थियो देखि भारत र च्याट बन्द । तपाईं गर्नुभयो भने यो उद्देश्य मा त म दु: खी छु भने, म तपाईं चोट कुनै तरिका हो । तर म डब्ल्यू. नमस्कार.
हामी थिए चैट, र यो मिल्यो काटिएको कारण शक्ति कटौती छ । तपाईं यो सन्देश देख्न, तपाईं जवाफ । अरे पावलले, यो मलाई देखि इन्डोनेशिया गर्ने कुरा देखि तपाईं संग फ्रान्स बारेमा धेरै कुराहरू जस्तै: सम्बन्ध, प्रेमिका, आफ्नो जीवन । अरे अनिता, हामी भएको थिए एक राम्रो कुरा को लागि घण्टा र म काटिएको भन्दै गर्दा बच्चा । आशा छ त्यसैले हामी फेरि भेट्न हुनेछ. नमस्ते कमल, यो राहुल म आशा थियो के तपाईं कल वा पाठ वैसे कल, तर म बस जान्न चाहन्थे कि के रोकियो तपाईं देखि. म थियो बस संग चैट, एक मानिस नाउँ एलेक्स देखि बेलायत वर्ष पुरानो र अचानक मेरो सन्देश थिएन देखा मा आफ्नो. आफ्नो नाम निकोलस, आफ्नो इमेल छ, र सामान्यतया आफ्नो मित्र कल तपाईं निक छ । तपाईं एक बिल्ली उनको नाम । नमस्कार एलन. तपाईं कहिल्यै फेरि माथि देखाउन यो वेबसाइट मा देख्न र मेरो सन्देश । अविश्वसनीय माफ गर्नुहोस् । गर्न छ । अरे आफ्नो जेनिफर. म थियो बस कुरा सिन्हा, म जस्तो लाग्छ । म हराएको जडान र यो समाप्त च्याट. नमस्ते, मेरो नाम छु, एक कलेज विद्यार्थी देखि. छु र म प्रयास गर्न कसैले पाउन जीवित जर्मनी मा साक्षात्कार गर्न लागि मेरो छ । नमस्ते. म देख थियो म थियो भने गलत जब तपाईं कहिल्यै मलाई भनिन्छ । म चाहनुहुन्छ.
प्रयोग गर्दा तपाईं च्याट अपरिचित, हामी तपाईं जडान गर्न अर्को अनियमित च्याट प्रयोगकर्ता गरौं र तपाईं मा पाठ च्याट, प्रत्येक अन्य संग. च्याट सेवा पूर्ण अज्ञात, आफ्नो च्याट साथी देख्न सक्दैन, जो तपाईं छन्, र तपाईं रोक्न सक्नुहुन्छ, एक च्याट मा कुनै पनि समय — यो तपाईं मदत गर्छ सुरक्षित रहन. च्याट गर्न छ बस एक क्लिक टाढा छ । कुनै दर्ता आवश्यक छ क्रम मा प्रयोग गर्न हाम्रो च्याट सेवा. पनि, यो निःशुल्क प्रयोग गर्न छ — यति, अपरिचित कुरा अब । यो च्याट अपरिचित गर्न ठूलो तरिका हो नलिनुस् संग अनलाइन अनियमित मान्छे कि तपाईं सामना छ । कि तपाईं को लागि देख रहे पुरुष वा महिला, मिति वा मित्र, या तपाईं बस नरमाइलो लाग्यो, यो अनियमित च्याट तपाईं को लागि छ. अपरिचित कुरा र तिनीहरूलाई बारी मा पनि आफ्नो परिवार । सबै भन्दा राम्रो तरिका गर्न, नयाँ मान्छे भेट्न, अनलाइन च्याट अनियमित रात र पूरा को एक नम्बर रोचक मान्छे छन्, जो पछि नै सामान रूपमा तपाईं. प्रयोग गरेर, अपरिचित तपाईं स्वीकार प्रचलन मा उल्लिखित नियम र गोपनीयता नीति